အဖြူရောင်အိမ်လေးတစ်လုံး: အဖေ. ထံသို. မွေးနေ. အမှတ်တယ
... 3:01:00 AM
ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်ပြီး ရင်ထဲမှာ တစ်မျိုးခံစားသွားရတယ်၊ ဒီလို သားသမီးတွေကို နားလည်ပြီး စိတ်ချမ်းသာအောင် အမြဲတမ်းအားပေးတတ်တဲ့ အဖေတစ်ယောက်ရှိတာ တကယ့်ကို ဂုဏ်ယူစရာပါ။ မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေ။
1 March 2009 at 5:12 AM
အဖေ့အကြောင်းဖတ်ရင်း အဖေ့ကို လွမ်းသွားတယ် ....
ကျွန်တော့်ဖေဖေမွေးနေ့တောင် ရောက်တော့မယ် ...
မိခင်မေတ္တာ ... သူတို့မေတ္တာတရားကို နှိုင်းတုဖက်ယှဉ်နိုင်မယ့် မေတ္တာတရားဆိုတာ ပေါ်ထွက်မလာခဲ့သေးပါဘူး ...
28 June 2009 at 12:56 AM
အခုတော့ အသက်ရလာလို့လား မသိဘူး ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာကို ပိုပြီး ခံစားသိတက် လာခဲ့ပါတယ် ၊၊ ဟိုးအရင်ကတော့ မိခင်ကို ပဲပိုခဲ့တာ ၀န် ခံပါတယ် ၊၊ အခုတော့ ဖခင်မေတ္တာကို ပိုပြီး နားလည် လာတယ် ၊၊ ဒါကြောင့်လည်း အမှတ်တယအဖြစ် အဖေ့ အကြောင်းလေးကို ရေးဖြစ်ခဲ့တာပါ ၊၊
အဖေတွေကို နားလည်တယ် ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ် ၊၊
အများအားဖြင့် မိခင်မေတ္တာဘွဲ့တွေက များတယ်လေ....
အမေ့ကိုလည် အသက်မက ချစ်ပါတယ်.........
28 June 2009 at 11:52 AM
(ဘာမှမဖြစ်ရင်တော့ ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့ကွာ) မမီးကောင်းကောင်းမှတ်ထားမယ်
22 September 2009 at 10:54 PM
အဖေခွဲသွားတော့ ထင်သလို လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်မှုမရှိခဲ့ဘူး နေ့တိုင်းအသက်ရှုဖို့ အောက်စီဂျင် မလုံလောက်ဘူး ရှေ့ဆက်လျှောက်ရမယ့်လမ်းကို မမြင်နိုင်ဘူး။ အဖေရယ် ဘယ်အချိန်ပြန်လာမှာလဲ
လွမ်းလိုက်တာများ အဖေရယ် .............
22 September 2009 at 10:56 PM